Khamiis, July 19, 2012 (HOL) — Madaxweynaha Soomaaliya, Sheekh Shariif Sheekh Axmed ayaa ku tilmaamay warbixintii kooxda baarista Qarammada Midoobay ee uu ka mid ahaa mas'uuliyiintii lagu eedeeyay inay tahay mid looga gol leeyahay in nabdda Soomaaliya lagu burburiyo, isagoo sheegay inaysan jirin hanti ay lunsadeen.
"Kooxdan baarista (Monitoring Group) waxay ka mid tahay cadawga Soomaaliya, waxaana is-weydiin leh 20-kii sano ee lasoo dhaafay ma sameeyeen warbixin, maxaa u diiday inay sameeyaan, waayo dad ayaa la dhacay, dad ayaa la dilay, dad ayaa la kufsaday; balaayana way dhacday, warbixin ay ka sameeyeenna ma jirto, dowladda markii lagu dhisay Jabuuti - boqol doolar nalooma dhiibin, cid aan lacag ka soo qaadanno oo noo muuqatayna ma jirin, lacagtii aan howsha ku billowynayna waxaan ka daynsannay ganacsatada Soomaaliyeed," ayuu si kulul u yiri Sheekh Shariif.
Dhanka kale, Sheekh Shariif ayaa sheegay inay ka go'an tahay inuu xilka mar kale qabto, isagoo sheegay inuu doonayo inaysan lumin fursadihii ay kasoo shaqeeyeen isla markaana uu doonayo inuu waddada u xaaro da'yarta Soomaaliyeed si ay ugala wareegaan hoggaanka dalka, maadaama aysan meesha iska joogayn.
"Waxaan doonaynaa inaan xaqiijinno mustaqbal ummadda Soomaaliyeed, dadka aan anigu ugu yarahayna waxaan leeyahay waqti badan ayaa naga lumay, welina ma arag dowladnimo taam ah," ayuu yiri Sheekh Shariif.
Madaxweynaha Soomaaliya, wuxuu hadalkiisa ku daray inuu doonayo inaanay mar kale lumin fursad, ayna da'da soo koraysa u diyaariyaan mustaqbal wanaagsan si ay ula wareegaan hoggaanka dalka.
"Fursad in nala siiyo ayaan u baahannahay, waayo waxaan doonaynaa inaan kuwa naga yaryar iyo caruurteenna u diyaarinno, talada dalkana aan u banneyno," ayuu Sheekh Shariif ku sheegay hadal uu ka jeediyay munaasabadda uu isku sharraxayay.
Ugu dambeyn, madaxweynuhu wuxuu sheegay inuu doonayo inaysan meel cidlo ah uga tegin howshii ay soo qabteen, balse ay ka go'an tahay inay dhameystiraan, isagoo xusay inuu diyaar u yahay inuu dalka ku hoggaamiyo dareen wadaniyadeed iyo mid Soomaalinimo oo daacad ah.